Philips HR2118 Blender | Buy online | SHOP.COM.MM
မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းဆို Philips တံဆိပ်ကိုပဲ ရွေးဖြစ်တယ်။
အသီးဖျော်ရည်ဖျော်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ မရှိမဖြစ်ရှိထားသင့်တဲ့ blender ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးရတာလဲ အရမ်းလွယ်ပြီး ကြာရှည်အသုံးခံတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းပါ။ Read more Hide
The Philips blender is fantastic. I bought it for making soups and it really does its job.
Philips Blender လေးက ကြိတ်ရမွှေရအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ အရည်အသွေးလည်းကောင်းလို့ ကြာရှည်လည်းခံတယ်။ Read more Hide
အိမ်သုံးအတွက် ကွက်တိပဲ။ ဖျော်ရတာလွယ်တယ် အဆင့်တွေမရှုပ်ဘူး။ ကြိတ်တာမြန်လို့ ကြိုက်တယ် Read more Hide
Specifications of HR2118 Blender